Indlu epholileyo eselunxwemeni
Indawo yokulala ethokomeleyo neyabucala, ikhaya elingaselunxwemeni imizuzu emi-2 yokuqhuba ukuya kwinombolo yesi-5 elwandle kunye nokuqhuba imizuzu emi-2 ukuya kwindawo yokungena, ebekwe kwindawo ezolileyo nenoxolo ngakumbi. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile, nangona nceda uqaphele ipropathi ayibiyelwanga ngokupheleleyo.
Nceda uqaphele: idesika engasemva ayibiyelwanga, kwaye nangona ingena kwizikhokelo ezisemthethweni, ingaphantsi nje kwemitha ukuphakama kwiindawo, ngoko ke lonke ukhathalelo kufuneka luthathwe kunye nabantwana.
Ukulala 6. Vula ikhitshi leplani, indawo yokuphumla. Isitovu esipholileyo esineenkuni ezininzi ezibonelelweyo.Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, elineti yasimahla, ikofu. Isidlali seCD, unomathotholo, iDVD/ikhasethi player, TV. Umhombiso ongaphambili nangasemva ujonge ngasese, igadi yemithi.BBQ
4.67 · Izimvo eziyi-117
Ime kwindawo ezolileyo ye-2 'estate', imizuzu emi-2 ukuqhuba ukuya kulwandle oludumileyo lwe-surf. Imizuzu emi-2 ukuya kwijethi kunye ne-inlet. imizuzu emi-5 ukuya kwiivenkile zaseVenus Bay